FIFAMONOANA TAO ANATY TAXIBE : Lehilahy voalaza ho « Polisy » nidaroka sy nanambana basy tovolahy iray
Talanjona ny rehetra omaly maraina raha nahita tovolahy iray nilaza handeha hianatra novonoin’ny rangahy iray voatonona ho Polisy. 11 avril 2018
Fiara mpitatitra laharana 182 teo Ampefiloha no nitrangan’ity famonoana ity ary avy hatrany dia sahy nanambana basy ny iray ka nidaroka mafy ity tovolahy. Naratra mafy izy io tamin’izay fotoana izay ary tsy fantatra mazava izay tena anton’ilay ady ka tsy misy sahy niditra ny fifandirana.
Ny rehetra ihany koa natahotra ity nitondra basy satria toa milaza ho Polisy ary tsy nisy nahalala izay niavian’ny fifandirana rahateo. Misy ireo olona sasany no nilaza fa noho ny fifampisisihana teo amin’ny fidiran’ny fiara no nahatonga ny ady.
Avy hatrany moa dia noentina teny amin’ny Hjra ity zazalahy ity ary fantatra ihany koa fa saika handeha hianatra teny amin’ny Ispm no tena anton-diany tamin’io omaly maraina io. Ity namono kosa lasa tsy hita ka mbola nifampitadiavana indray nony avy eo.